Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao Mafampana Aostralianina » Nanjavona ny sarin'i Aostralia ho firenena tan-dalàna, fitoviana ary zon'olombelona
Vaovao Mafampana Aostralianina • Aviation • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Vaovaom-panjakana • Vaovao Mafana India • Vaovao • People • tompon'andraikitra • Safety • Tourism • Dinika fizahan-tany • Fitaterana • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • Vaovao isan-karazany
"Miketrika oksizenina ara-bakiteny i India," ny minisitry ny fahasalamana aostralianina dia mandefa fanomezana «ventilator», saron-tava, solomaso ary fonon-tànana ho an'ny firenena. Mandritra izany fotoana izany dia manameloka ny olom-pireneny voafandrika any India hatramin'ny fahafatesany i Aostralia.
Sambany teo amin'ny tantarantsika, ho heloka bevava ho an'ny Australiana sasany ny hody avy any ampitan-dranomasina. Ny teny hoe governemanta Nazi dia ampiasain'ny sasany.
Na ara-dalàna na tsia, dia ahiana tokoa ny asan'ny minisitry ny fahasalamana aostraliana Greg Hund ka hiteraka fahafatesan'ny aostralianina India.
miaraka AostraliaNy rafi-pahasalamana sy ny rafitra ara-pahasalamana, dia hisy ny aina voavonjy raha ireo teratany aostraliana ireo no niondrana an-trano avy any India. Fahadisoana lehibe nataon'i Greg Hunt.
Aostralianina dia milaza amin'ireo olompirenena ao anaty fahantrana fa irery izy ireo. Ny aostralianina manandrana mody avy any India dia mety higadra 5 taona an-tranomaizina sy / na onitra 66,600 $. Ny fandrarana vonjimaika no voalohany tamin'ny tantaran'i Aostralia izay nahatonga azy ireo tsy ara-dalàna ny fodian'ny mponin-tanindrazana. Mihatra manomboka amin'ny Alatsinainy ny lalàna ary hojerena amin'ny 15 Mey.
Teratany Aostraliana 9000 te-hody avy any India ary iharan'ny sazy heloka bevava sy fonja izao raha manandrana izany izy ireo.
Human Rights Watch dia nilaza fa manan-jo hody any amin'ny fireneny ny aostraliana. Nanampy ny Human Rights Watch i Aostralia fa tokony hifantoka amin'ny fitsipiky ny quarantine azo antoka ho an'ny mponina miverina fa tsy mametraka angovo ho fanaovana heloka bevava ho an'ny olom-pireneny hitady filaminana ao an-trano.
Hampiato ny sidina mivantana ataon'ny mpandeha avy any India hatramin'ny 15 Mey i Aostralia mba hialana amin'ny fihanaky ny variana Covid-19 maloto kokoa. Nilaza ihany koa ny praiminisitra Scott Morrison fa handefa kojakoja ara-pitsaboana any India i Aostralia, izay sahirana amin'ny tsy fahampian'ny fandriana sy ny famatsiana oksizenina.
Adidin'ny governemanta Aostraliana ny hitondra ny olom-pirenena hody fa tsy hanidy azy ireo. Io no tokony ho governemanta nazi be indrindra hitan'ity firenena ity, hoy i Frank Bird, aostralianina tezitra.
Ao anatin'ny 48 ora manaraka dia horahonana ho gadraina dimy taona raha efa niditra izy ireo India tato anatin'ny tapa-bolana.
Tsoriko fa tsy taitra tamin'ny fihetsika nanameloka ny hetsika famerenana olom-pirenena avy aho India ny Aostralia, ny sasany amintsika dia mahalala hatrany fa olom-pirenena 'manana fepetra' isika, hoy ny bitsika nataon'i Nyadol Nyuon, teratany aostralianina tafahitsoka ao India.
Hoy i Alan Sunderland: “Tokony hanao planina fiaramanidina am-polony i Aostralia rehefa miteny hitondra ny olom-pirenena Aostraliana hody avy any India araka izay tratrantsika izahay. Ny tongotra miverina amin'ireo sidina ireo dia tokony ho feno tanky oksizenina sy famatsiana fanafody maika hafa. Tsy azo atao ny manao kely kokoa noho izany. ”
Neha Mdouk dia nilaza fa: manavakavaka tanteraka ny olona manidina Aostralia avy amin'ny India mety higadra dimy taona. Rehefa nahita isa nampihoron-koditra i Etazonia, Italia, Angletera, ary Espana, tsy nisy fotoana noheverina ho valiny fanasaziana. Fitsipika iray ho an'ny olona miloko, ary iray hafa ho an'ny fotsy hoditra.
Fanapahan-kevitra tohanan'ny siansa? Quarantine ho an'ny olona rehetra avy any amin'ny faritra Azia sy maro hafa, ary koa ho an'ny maro aorian'izany India handeha ho any Thailandy, Malesia ary hiverina any Aostralia, nanampy an'i Nicola.
Niverina avy ireo kintan'ny cricket Australiana Kane Richardson sy Adam Zampa India na eo aza ny fandraràn'ny governemanta federaly ny dia amin'ny firenena noravan'ny coronavirus.
Peter Cronou nanampy hoe: Aostralia, mahamenatra azy fa tsy nanohana ny fanafoanana ny zon'ny manan-tsaina amin'ny vaksinin'ny COVID-19 - ka manameloka olona an'arivony maro ho faty.
Tsapan'ny Expat aostralianina any India fa milaza ny olom-pirenena vitsivitsy ao amin'ny governemanta Aostralianina India dia ambany noho ny olona an-tapitrisany Aostralia.
"Nilamina izao ny toe-draharaha ary matoky izahay fa afaka mivoaka any ampita"
Ny kaomisera ambony misahana ny asany eto India PS Karthigeyan dia niresaka @kochie_online momba ilay onja faharoa nampidi-doza nataon'ny firenena voan'ny coronavirus… pic.twitter.com/w6CyOEr1vh
- ImAllNews (Australia) (@ImAllNews_AU) Enga anie 2, 2021
Amit Kumar any Aostralia dia mampitaha an'i India amin'i Aostralia: Toy izany koa ao Aostralia vady. Tany 3x lehibe kokoa noho ny India ary ny mponina dia 2.5 crore fotsiny, 55x ambany ary 150x ambany ny isan'ny mponina miaraka amin'ny rivotra madio kokoa, avo kokoa ny vola miditra isan-kapita sns sns… Mbola tsy misy vaksiny eto. Tsy azo ampitahaina ny roa!